Izizathu ezi-7 zokuba kutheni iiFomu zeKhokelo zifile | Martech Zone
NgoMvulo, nge-30 kaJanuwari, 2017 NgoMgqibelo, uJanuwari 28, 2017 U-Muhammad Yasin
Bobabini abathengisi bedijithali kunye nezitena kunye nevenkile zodaka zihlala zizingela ngeendlela ezintsha kunye neendlela ezintsha zokufaka ezinye izikhokelo kunye nokuziguqula zibe kubathengi abahlawulayo. Ukutsho ukuba lo ngumceli mngeni omkhulu kunokuba yinto eyoyikisayo, njengoko ukufika kwe-intanethi kuye kwenza ukhuphiswano lwaba lubi kuwo onke amashishini.
Kuyo yonke le minyaka, iivenkile ziya kufaka iifom "zoQhakamshelwano nathi" kwiwebhusayithi yabo ngethemba lokuba izikhangeli ezinomdla ziya kudibana nazo. Ezi fom "Qhagamshelana nathi" yile nto thina bathengisi bedijithali siyibiza "Iifom zeNkokeli eziShukumayo;" Kwaye ngelixa besebenza injongo malunga ne-10-15 kwiminyaka eyadlulayo, abaphantse babenempumelelo njengoko bebefudula besenza. Ngapha koko, bendiya kude ndiye kutsho bafile kakuhle.
Njengoko benditshilo kumanqaku angaphambili, imithombo yeendaba esebenzisana nayo iya ithandwa ngakumbi phakathi kwabathengisi (zombini idijithali kunye nezitena nodaka), kwaye ithatha indawo yesidingo ngokukhawuleza kweefom zokukhokela. Okwangoku, usenokuzibuza "Ukuba abathengisi basasebenzisa iifom ezikhokelayo, kutheni ucinga ukuba bafile?"
Nazi izizathu ezi-7 zokuba kutheni iiFomu zeKhokelo zifile:
1. Akukho mntu ufuna ukugcwalisa iiFom zeStatic kwakhona
Kule minyaka imbalwa idlulileyo, iifom ze-static lead azisiyonto ngaphandle komhombiso. Akukho mntu unika ingqalelo kwiifom zokukhokela kwakhona; kwaye inyani, abo bathengi abafumani nantoni yexabiso ngokungenisa ulwazi lwabo. Emva kokungenisa ulwazi lwabo loqhakamshelwano, kufana nokuba kungena emngxunyeni omnyama… kude kube umthengisi wentengiso ubabizele phezulu, ewe.
Emva kokuba abathengi bangenise ulwazi lwabo loqhakamshelwano, ithemba kukuba umntu ovela kwinkampani uya kubuyela kulwazi kunye nezixhobo abazifunayo. Ngoku, ukuba ndiye ndafunda nantoni na njengokuthenga rhoqo kwi-Intanethi, eyona njongo yezi fom kukufumana ulwazi lwabo lokunxibelelana kunye nokuzithengisa. Ngamanye amaxesha izikhokelo ziyondla, kwaye ngamanye amaxesha azinjalo. Nokuba yeyiphi na indlela, uninzi lwabathengi abathi ngokuzithandela bagcwalise ifom ekhokelayo mhlawumbi basesezingeni lokuthenga (okanye kwisigaba sophando) -thetha ukuba abakakulungelanga ukuthenga okwangoku.
Pha bekunjalo inqaku ngexesha xa kuzaliswa ifom ekhokelayo emileyo yayiyinto nje abathengi abayenzileyo ukufumana ulwazi olongezelelweyo. Nangona kunjalo, ngokufika kwe-intanethi, abathengi baye bakhetha ngokukhethekileyo malunga neemveliso kunye neenkonzo abazityalayo-kwaye kunjalo! Kukho ukhetho oluninzi ngakumbi kubathengi abanokukhetha kulo, ke bathatha ixesha lokwenza olo phando. Ukuba basafuna ulwazi olongezelelekileyo, ngekhe bafune ukuthengiswa ngokukhawuleza.
Amava asebenzisanayo (okanye iifom zokukhokela ezisebenzisanayo) zikhawuleza zigqithe iifom ezikhokelayo njengeyona ndlela ikhethwayo yokubamba ekhokelayo kumashishini akwi-Intanethi. Isizathu soku kungenxa yokuba ivumela abathengi ukuba bathathe inxaxheba ngeendlela ezimbini zokuthatha inxaxheba kwiwebhusayithi yakho ukuze bafumane iimpendulo abazifunayo.
Masithi, umzekelo, umboleki ufuna ukwazi ukuba loluphi ukhetho lwezemali olulungele imeko yabo ngaphambi kokuthenga ifanitshala. Umzekelo olungileyo wamava asebenzisekayo uya kuba uvavanyo oluvavanya umsebenzisi ngokomntu ngamnye (ngokusekwe kulwazi olwahlukileyo abalunikezelayo) kwaye ibabonelele ngesisombululo esibambekayo. Oku, kunjalo, kukhokelela kwindawo yethu elandelayo….
2. Amava okuSebenzisana avelisa iiRhafu zokuzibandakanya eziPhakamileyo
Ngokungafaniyo neefom ezikhokelayo, amava adibeneyo avumela abathengi ukuba babenencoko kunye newebhusayithi yakho. Endaweni "yokuzalisa izikhewu" (Igama, i-imeyile, umnxeba, amagqabantshintshi), incoko yenzeka kuthotho lwemibuzo neempendulo. Ngenxa yoku, amaxabiso okubandakanya iwebhusayithi ahlala ephezulu kakhulu kunalawo eewebhusayithi aneefom zokukhokela ezimileyo.
Enye yeendlela eziqhelekileyo zamava okusebenzisana kuvavanyo. Kumava ovavanyo, iimveliso zibuza abathengi imibuzo eyahlukeneyo ukuze bafikelele kwizigqibo malunga nabo kwaye babanike isisombululo kwingxaki abanayo ngoku. Masithi, umzekelo, umthengi undwendwela iwebhusayithi yezindlu kwaye uzama ukufumana ukuba yeyiphi iplani yomgangatho abaza kuhamba nayo (kwaye zininzi izinto onokukhetha kuzo). Kuyavela ukuba le yingxaki eqhelekileyo kubaninzi abanokuba ngabaqeshi. Indlela elungileyo yokusombulula le ngxaki kunye nokunyusa ukuzithemba kwabathengi kukwenza uvavanyo olunikezela ngeengcebiso zesicwangciso somgangatho. Ngokwamava, iwebhusayithi izakubuza imibuzo efanelekileyo ekhethiweyo (Ex: "Bangaphi abantu kusapho lwakho? Ngaba unabantwana? Ngaba unezilwanyana zasekhaya ezinkulu, njl. Njl.") .
Ngoku, uyayiqonda into endithetha yona xa ndisithi "abathengi banokuthetha newebhusayithi yakho?" Iwebhusayithi ibuza imibuzo kwaye umthengi uphendula ngeempendulo zale mibuzo. Kungenxa yokuba iincoko zihlala zithatha ixesha elide kunokugcwalisa nje ifom, oko kuthetha ukuba ukuzibandakanya kwiwebhusayithi yakho kuhlala ixesha elide. Ukongeza, emva kokuba umthengi ebonelelwe ngesisombululo esinokubakho (masithi, ngenxa yengcaciso, ligumbi lokulala elinamagumbi amabini, isicwangciso sokuhlambela esingu-2), amathuba alungile ukuba umthengi afune ukuhlala kwiwebhusayithi yakho kwaye enze uphando oluninzi ngakumbi kwisisombululo (okanye isicwangciso somgangatho, endaweni yoko). Iifom zokukhokela ezi-static aziboneleli sisombululo kwangoko; Ke sesiphi esona sizathu sokuba umboleki angahlali kwiwebhusayithi yakho ade abizwe ngumthengisi wentengiso? Kungenxa yoko le nto ukuzibandakanya kuhlala kuphantsi kakhulu kwiiwebhusayithi ezineefom zokukhokela ezimileyo.
3. Ngothethathethwano oluPhakamileyo kuza ukuGuqulwa okuPhezulu
Njengoko besenditshilo ngaphambili, abantu abanamdla wokugcwalisa iifom zokukhokela ezimileyo. Kwakhona, ulwazi lwabo luya kwinto engaziwayo (de babhejwe ngumthengisi, okuhlala kunjalo) kwaye abafumani nto ngexabiso emva kokuba bengenise ulwazi lwabo loqhakamshelwano. Ngeendlela ezininzi, abathengi baziva ngathi bayakhohliswa. Bathenjisiwe ngento enexabiso, kodwa musa ukusoloko uyifumana. Kungenxa yoko le nto abathengi bengazalisi iifom zokukhokelela ezingapheliyo.
Esinye sezizathu eziphambili zokuba amava okusebenzisana asebenze ngempumelelo kuba ivumela ii-brand ukuba zenze izithembiso abanokuzigcina! Endaweni yokuba balinde ulwazi olongezelelweyo kumthengisi wentengiso, banokufumana isisombululo kwimizuzu nje embalwa. Ukuba abathengi baqinisekisiwe ngezisombululo ezikhawulezileyo, abayikuqala nje ngamava; bazokugqibezela amava kwaye baguqule ukusuka kumthengi baye kwisikhokelo esipheleleyo. Abathengi abafuni ukulinda omnye umntu ukuba abanike ixabiso lokurhweba ngezithuthi zabo, kwaye abafuni ukuphinda bathengise kwisicwangciso somgangatho obiza ngokungafunekiyo kwindawo yokuhlala. Abathengi kunokuba babeke amaqanda abo kwibhasikithi enye kuqala ngaphambi kokuba baye kwinqanaba lokuthenga / lokuqeshisa.
Isisombululo kwingxaki yomthengi sesona sikhuthazo sokugqibezela amava. Ndiyathetha, amava aqinisekileyo-asebenzisanayo angathatha ixesha elide (kuba abathengi kufuneka baphendule imibuzo ukuze bafumane iziphumo zabo), kodwa ukuba oko kuthetha ukufumana ngokukhawuleza ixabiso elithile eliza kubanceda kwisigqibo sabo sokuthenga, baya kuthatha ixesha elongezelelweyo. Kwaye ukuze sicace gca, izikhuthazi zingayinto nantoni na ofuna ukuba ziyiyo. Inokuba lixabiso lokurhweba, kuvavanyo (okanye ingxelo), isigqebhezana okanye isaphulelo, incwadi ye-e-nantonina oyithandayo.
4. Amava aSebenzayo asebenzisekayo aBantu aBakhulu kakhulu
Nokuba ngubani otyelela iwebhusayithi yakho, iifom ezikhokelayo ezimileyo ziya kuhlala zijongeka kwaye zisebenza ngendlela efanayo. Kukho indawo yokugcwalisa igama lakho, inombolo yakho yefowuni, idilesi ye-imeyile, kwaye ngamanye amaxesha kukho indawo yemibuzo okanye izimvo. Oko kukusisiseko esipheleleyo sefom ekhokelayo emileyo. Ngamanye amaxesha ungawutshintsha umbuzo, ngamanye amaxesha awukwazi. Nokuba yeyiphi na indlela, ngokuyintloko inqanawa yokufaka ulwazi loqhakamshelwano- kwaye akukho nto ingaphaya koko.
Amava asebenzisanayo, nangona kunjalo, anezinto ezinokubakho ezingapheliyo zokwenza ulwenziwo. Amava okusebenzisana akonelisi kwiinjongo zeshishini lakho kuphela, kodwa ahlangabezana neemfuno zabathengi bakho. Umqathango kuphela kumava owenzayo kukuba uthembisa into enexabiso. Inokuba luvavanyo, isaphulelo, ukurhweba ngexabiso, ukungena kwi-sweepstakes- nantoni na eya kulukuhla isiseko sabathengi bakho ngokwaneleyo ukuba babancede bagqibe amava.
Ngaphandle kokukwazi ukwenza ngokwezifiso uhlobo lwamava olwenziweyo (kunye nokwenza imibuzo ngokwezifiso), enye into epholileyo kukuba uphawu lwakho lunolawulo olupheleleyo kwinkangeleko yamava asebenzisanayo. Yonke into esuka kwiskimu sombala, ukuya kwimifanekiso eqingqiweyo, kwaye okona kubaluleke kakhulu, kukufaka uphawu lokumakisha, kuxhomekeke ngokupheleleyo kumdali. Yeyiphi indlela ebhetele yokuqinisekisa uphawu lwakho kunokuba uludibanise neefom zakho zokukhokela ezisebenzayo? Ayisiyiyo kuphela ukuba umthengi azi ukuba ulwazi luza ngqo kuwe, kodwa uphawu luya kunika umbono wokuba bayayifumana kanye le nto bayifunayo.
Ndicinga ukuba inqaku endizama ukukwenza kukuba zonke ezi ntlobo zamava zinomdla. Ayilohlobo olucacileyo oluvumela kuphela ukufaka isicatshulwa. Abathengi akusafuneki ukuba "bathethe eludongeni." Iwebhusayithi yakho inokuqokelela ulwazi oluthile kumthengi kwaye ivelise into enexabiso ngokusekwe kulwazi oluqokelelweyo. Ifom ekhokelayo emileyo ayinakuyenza loo nto.
5. Kulula kakhulu ukwahlula ubuqu bakho kukhuphiswano lwakho
Nangona iifom ezikhokelayo zingeyondlela eyaziwayo yokuba abathengi babuze malunga nolwazi oluthe kratya, kusekho iitoni zeenkampani ezikhetha ukubetha ezi fomu kwiiwebhusayithi zazo. Ngelixa inani leemveliso ezisebenzisa amava okusebenzisana liyanda, uphawu lwakho luya kubonakala phakathi kwabo bakhuphisana nabo. Ngoba? Ewe, masichaze okucacileyo- ayinguye wonke umntu osebenzisa umxholo onxibelelanayo kwiimfuno zabo zokubamba. Ukuba ubeka naluphi na uhlobo lwamava asebenzisanayo kwiwebhusayithi yakho, iya kuma ngokukhawuleza kubathengi bakho. Endaweni yokugcwalisa ifom eqhelekileyo kunye nokulinda impendulo, baphendula imibuzo kunye nento enexabiso. Amava kuphela ahluke kakhulu.
Okwesibini, akufuneki silibale malunga nokwenza ngokwezifiso iifom zokukhokela ezisebenzayo. Ayisiyi kuphela ukujongwa ngokubanzi kwefomu ekhokelayo edibeneyo ebonakalayo ezingqondweni zomntu, kodwa amava olona vavanyo (uvavanyo, uvavanyo lwentengiso, imibuzo, umdlalo, njl.) Ayilibaleki kwaye yinto okhuphisana nayo mhlawumbi ayiyo ' ndiyakwenza…. okwangoku.
6. Iifom zokuKhokela eziQinisekileyo azikwazi ukuFaka isixa seDatha yeNtengiso yeDijithali
Zeziphi ezona ndawo zixhaphakileyo ozibonayo kwifom ekhokelayo? Igama, umnxeba, idilesi ye-imeyile, uhlobo lophando (uhlala ulahla) kwaye ngamanye amaxesha indawo yezimvo kunye nemibuzo. Ayilulo lonke ulwazi, akunjalo? Ulwazi loqhakamshelwano lomboleki alunikezeli nakuphi na ukuqonda kwinto eyenza ukuba umthengi ahluke. Akukho lwazi malunga nokukhetha ukuthenga, ixesha lokuthenga, umdla wabathengi-uluhlu luyaqhubeka. Kuba akukho nto incinci yokwenza ulwenziwo olubandakanyekayo kwiifom ezikhokelayo ezimileyo, awunakho ukubuza abathengi imibuzo malunga nezinto uphawu lwakho olufuna ukwazi ngakumbi ngazo.
Ngenxa yokuba iifom ezikhokelayo zingenziwa ngokwezifiso, uphawu lwakho lunolawulo olupheleleyo kuyo nayiphi na imibuzo ebuziweyo. Ukuba ufuna ukufunda ngakumbi malunga nomthengi onomdla ekuthengeni okanye ukuba banomdla wokufunda malunga neenketho zemali, konke okufuneka ukwenze kukucela. Kubalulekile ukubuza le mibuzo yabathengi bakho kuba iyanceda wena (umthengisi wentengiso yedijithali) ukuze ufumane ukuqonda okungcono ngesiseko sabathengi bakho kunye nendlela yokuthengisa kubo kwixa elizayo.
Ukongeza ekuncedeni abathengisi bedijithali njengawe, iqela lakho lokuthengisa (ukuba likho) linokuluhluza ulwazi olufunyenwe laya kwinqanaba lomntu, wakhe iiprofayili zabathengi kwaye wenze ngokwezifiso ukulandela kwabo ngokusekwe kulwazi olwahlukileyo kwiprofayile yabo.
7. Abasebenzisi bagcina ulwazi oluninzi
Kunye nokukwazi ukubuza imibuzo eyahlukileyo, amava adibeneyo anika iimveliso kunye nethuba lokwazisa kunye nokuhlala ngaphezulu kwengqondo. Emva kokuba umthengi egqibile ngamava okusebenzisana kwiwebhusayithi yakho (kwaye efumene inkuthazo ngohlobo lovavanyo, uvavanyo, isaphulelo, njl.njl. kubonelelwe. Masithi, umzekelo, ungumthengi undwendwela iwebhusayithi yomthengisi. Ugcwalisa uvavanyo lwentengiso kwaye emva koko unikwa ixabiso lorhwebo lwakho.
Ke, ngoku? Ewe, loo mthengisi unokubonelela ngolwazi olongezelelekileyo kwinto abanokuyenza ukuqinisekisa ezo izikhokelo zemoto ezithinjiweyo ukufumana elona xabiso kurhwebo lwabo. Isenokuba kwimeko yokongezwa kwamava okusebenzisana. Elinye lamava linokuvavanya ukuba kufanelekile na ukuba bathenge “ezisetyenzisiweyo okanye ezintsha,” kwaye enye inokuba kukufumana ezona ndlela zibalaseleyo zokuxhasa ngemali. Nokuba amava akhethiwe, olo lwazi longezelelekileyo luvumela abathengi ukuba bacinge ngenene ngezigqibo abazenzayo ngophawu lwakho. Kwakhona, masinyaniseke ngokupheleleyo-kokukhona zingaphezulu kwengqondo-kwaye ngakumbi ukuba uphawu lwakho luye lwabonakala, kokukhona umthengi uya kuba nakho ukulukhumbula uphawu lwakho.
tags: umxholo wee-interactiveintengiso yokusebenzisanaImithombo yeendaba yokusebenzisanaiifom zokukhokelaiifom zokukhokela zifileizixhobo zokuthengisaI-PERQIi-CTAs ezikrelekrele
UMuhammad Yasin nguMlawuli weNtengiso kwi-PERQ (www.perq.com), kunye noMbhali opapashiweyo, onokholo olomeleleyo kwintengiso yamajelo amaninzi ehambisa iziphumo ngeendlela zemveli nezidijithali. Umsebenzi wakhe uqatshelwe ngokugqwesa kupapasho olufana ne-INC, MSNBC, Huffington Post, VentureBeat, ReadWriteWeb, kunye neBuzzfeed. Imvelaphi yakhe kwi-Operations, Ukwazisa ngeBrand, kunye neQhinga lokuThengisa ngeDijithali kukhokelela kwindlela eqhutywa yidatha kwindalo kunye nokuzalisekiswa kwemikhankaso yokuthengisa eendaba.
Kutheni sibuye saphinda saphinda satshintsha indawo yethu kwiMartech.zone
Jan 30, 2017 kwi-9: 09 AM
Sikubonile ngokupheleleyo oku. Iifom ezingatshintshiyo ziguqukele kwimigibe yogaxekile ngelixa kuvavanywa kunye nokunxibelelana, amaphepha abandakanyekayo aqhuba ngakumbi izikhokelo kunye nokuguqula. Inqaku elimangalisayo!
Ngaba unemizekelo emihle yoku? Ndicinga ukuba inqaku lenziwe kakuhle kwaye lithwala ubunzima. Nangona kunjalo, ukushiya iikhomenti, kuya kufuneka ugcwalise iifom ezi-3. #iintombi
Eyona ilungileyo. Gqabaza. Ngonaphakade.
Mar 1, 2017 ngo-10: 10 AM
Inqaku elinolwazi! Kubulelwa kakhulu. Kodwa nceda uqaphele xa unika imizekelo. Indawo yokuhlala ibuza "Unabo abantwana?" iya kuba yaphula umthetho we-Federal Fair Housing Act. Inqanaba losapho laba yiklasi ekhuselweyo ngo-1988. Enkosi kakhulu!
Mar 1, 2017 ngo-10: 14 AM
Inqaku elihle-enkosi ngokwazisa malunga naloo nto!